चे ग्वेभारा: कसरी क्रान्तिकारी बनेका थिए ? | Emedia Hub UK
Home Photo News चे ग्वेभारा: कसरी क्रान्तिकारी बनेका थिए ?
चे ग्वेभारा: कसरी क्रान्तिकारी बनेका थिए ?
चे ग्वेभारा विश्वक्रान्तिका नायक हुन् । अर्जेन्टिनामा जन्मिएर क्यूवामा क्रान्ति सम्पन्न गरी बोलिभियाको जंगलमा शहादत प्राप्त गर्ने क्रान्ति नायक चे ग्वेभारा आज विश्वका श्रमजीवी मजदुरहरुको ढुकढुकी बनेका छन् ।
विश्व साम्राज्यवादसँग लडेर दुनियाँभर कम्युनिस्ट शासन स्थापना गर्ने महान उद्देश्य बोकेर उनी बोलिभिया पुगे । अदम्य शाहसका धनी चेको त्यहीँ हत्या भयो । तिनै महान विश्व क्रान्तिका नायक चे ग्वेभाराको जीवन कस्तो थियो त ?
परिवारका तेते पछि चे बने
चे ग्वेभाराको शिक्षा दिक्षा सहज हुन सकेन । उनी दुई वर्षको उमेर मै दमको दीर्घ रोगी भए । अन्य बालकको जस्तो चे को स्कुल जीवन हुन सकेन । उनले ओच्छ्यानबाटै अध्ययनको थालनी गरे । भनिन्छ, उनको व्यवहार किशोर हुँदा युवाको जस्तो, युवाहुँदा परिपक्क प्रौढ जस्तो थियो । उनी आत्मविश्वासी, बहुआयामिक र विद्रोही स्वभावका थिए । शिक्षकको नजरमा मूढी, अनुशासनहिन तर अध्ययनशील थिए । अल्टा ग्रेसियाको स्कुले जीवन सकेर सन् १९४१ मा १३ वर्षको उमेरमै उनले डिन फ्यूनस स्टेट कलेजमा अध्ययन गरेका थिए । ४ वर्षको कलेज अध्ययन सकेर राजधानी ब्यूनस आयर्सको यूनिभर्सिटीमा मेडिकल विभागमा डाक्टरीको लागि उनी गए । तर उनको परिवारको चाहाना भने इन्जिनियर बनाउने थियो । क्यान्सर रोगबाट आप्mनी हजुरआमाको मृत्यु, आमाको क्यान्सरसँगको युद्ध र आफ्नै दम रोगका कारण उनी डाक्टरी पढ्नतिर लागे । उनले ६ वर्ष लामो विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम ३ वर्षमै पूरा गरे । उनले अध्ययनको क्रममा राम्रो नम्बर ल्याउनतिर कहिल्यै सोचेनन् ।
पढन्ते र घुमन्ते स्वभावका उनी घुम्दा घुम्दै माक्र्सदेखि फ्रायडसम्मका पुस्तकहरु अध्ययन गर्न भ्याए ।
उनी यात्रा गर्न औधी रुचाउँथे । अध्ययनको क्रममै उनी साइकलिङ गरेर देशको कुनाकाप्चा पुगे । स्वास्थका कारण भौतिक शरिर एकदमै जीर्ण देखिए पनि आत्मविश्वासका कारण देशविदेशको भ्रमण गर्न कहिल्यै छाडेनन् । पढन्ते र घुमन्ते स्वभावका उनी घुम्दा घुम्दै माक्र्सदेखि फ्रायडसम्मका पुस्तकहरु अध्ययन गर्न भ्याए । चिकित्सा क्षेत्रको शिक्षाको क्रममै उनी पूरै ल्याटिन अमेरिकाको अधिकांश स्थानमा पुगे । यात्राको क्रममा पूरै महाद्वीपमा व्याप्त गरीबीले उनको हृदयमा नराम्रो गरी चोट पु¥यायो । उनले गम्भीर भएर सोचेँ । शारिरीक रोगको जैविक कारणको त उपचार गर्न सकिन्छ तर सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक कारणको उपचार कसरी सम्भव होला ? यो जटिल प्रश्न उनको जीवनमा यक्ष प्रश्न बनेर आईदियो ।
उनको डाक्टरी जीवनमाथि नै प्रश्न चिन्ह बनेर खडा भयो । डाक्टर बनेर दिनदुःखीको सेवा गर्ने उद्देश्य राखेका चे अब गरीवी असमानताका सामाजिक राजनैतिक कारणहरु खोज्नतिर लागे । गाउँ गाउँ पुगे । विभिन्न वस्ती वस्ती पुगे । उनी उनले देखे, पैसाको अभावमा उपचार गर्न नपाएका गरीवहरु ।
भोक, पीडाले पशु समान जीवन बाँच्न विवस मानिसहरु, अभाव र गरीवीकारण बाबुहरु स्वयम् आफ्ना सन्तानको मृत्युको कामना गरिरहेको दर्दनाक दृष्यहरु समेत देखे ।
ड्राइभरका दुखद जिन्दगीहरु देखे । भरियाका कथाहरु सुने । चिलीका खानीहरुमा पुगे । अमेजन जंगलका रेड–इण्डियन आदिवासीहरुको वस्तीदेखि पेरुका खेत–खलिहानसम्म पुगे ।
क्यूवामा उद्योगमन्त्री हुँदा तलब भत्ता लिएनन्
क्रान्ति सम्पन्न भएपछि फिडेल क्यास्ट्रो राष्ट्रपति भए । चे ग्वेभारा भने केन्द्रिय बैंकका अध्यक्ष र उद्योगमन्त्री भए । तर रोचक तथ्य उनीले तलब भत्ता कहिल्यै लिएनन् । बरु निश्चित समय शारीरिक श्रमदान गरे । त्यही रकमबाट आफ्नो गुजारा चलाउ“थे ।
यता चेलाई मार्न निरन्तर अमेरिकी सरकारले आफ्नो कुख्यात गुप्तचर संस्था सीआईएलाई अह्राइरहेको थियो । सिआइएले चेलाई निरन्तर सन् १९५४ देखि १९६२ सम्म पछ्याइरह्यो ।
वीकीपिडिया डट कम लगायत अन्य वेवसाइटहरु
दिपासाको बारुली कम्मर लचक्कैः गीत जति जोशिलो, प्रस्तुति त्यत्तिकै शानदार
गौचन हत्यामा कुमार घैँटे कनेक्सन, अबको टार्गेट को ?